Ikhaya > Imikhiqizo > Ishaja Power Circuit Board
Iselula eshaja ngokushesha
1.Imingcele eshaja ifoni ngokusheshaIbhodi yamashaji eshaja yamandla eshaja 5V1A Ishaja yefoni yeselulaIvolthi yokufaka ngu-220V Amandla okukhipha yi-5V Ukushaja okuqondile kwenqubo yamanje engu-1000mA Engenakho ukuholaI-Canbe OEM 5V2A ishaja yefoni ephathekayo Umthamo wokufaka ngu-220V Amandla wokukhipha yi-5V Ukushaja okuqondile
Ukunikezwa kwamandla eselula
Unjiniyela usebenzisa ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, futhi ipharamitha yokukhipha kwamandla wesifunda izinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi ekubangeleni impilo yomkhiqizo.
Ngokubheka ukuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga izinto ezihlinzeka ngemikhiqizo efanelekile, lenze ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle kokuphazamiseka, futhi liqinisekise kaningi ukuqina kwalo. Ibhodi lesifunda lizofakelwa ibhokisi le-fuse lokuzenzakalelayo, ukuvikela okuzenzakalelayo okukhulu noma okufishane okuzenzakalelayo, futhi libuyisele ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha.
Ukushaja umakhalekhukhwini ngqo
Isendlalelo sangaphakathi sifakwe ucwecwe lwe-aluminium ukuvimbela ukuphazamiseka; - I-interface yokushaja ne-interface ye-USB yenziwa ngezinto ze-ABS, ezinobuso obukhanyayo, ukuzwa kwesandla okubucayi, ikhwalithi ephezulu nokuqina okuqinile.
Ukuhlala isikhathi eside kungakhishwa ngaphezu kwezikhathi ezingama-3000, ukushaja ukusebenza kahle kuphezulu, ukuhanjiswa kwe-superData, ukunciphisa ukulahleka kwamandla, ukuthuthukisa ukushaja izinga lokuguqulwa
Thenga i- Ishaja Power Circuit Board yethu ingajabulela insizakalo esezingeni eliphakeme, uvune intengo ephansi yemikhiqizo yekhwalithi. Inkampani yethu ingumkhiqizi oqeqeshiwe nomhlinzeki we- Ishaja Power Circuit Board, sinikezela ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso, eChina inezinto zokusebenza ezinhle zokukhiqiza kanye nobukhomanisi. Ngibheke phambili ekuvakasheni kwakho ~